WZX Weelka ugu fiican ee loo yaqaan 'WZX' | Wanzhanxing Apparel
Guri > War
WZX Weelka ugu fiican ee loo yaqaan 'WZX'
Yoga, oo ah nooc cusub oo jimicsi iyo jimicsi, waxay dadka ka caawisaa inay jimicsi sameeyaan jirkooda sidoo kalena waxay leeyihiin saamaynta raadadka iyo dib-u-soo-kabashada, waxay sidoo kale siinayaan dad badan oo ka badan kooxda yoga. Laakiin isboortigan, oo ka sokow waxqabadka heerka caadiga ah, lugaha yoga ee xirfadleyda ah ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah qalabka isboorti ee muhiimka ah ee la xiriira. Marka, muxuu dhagaxa yoga u caan baxay? Sababta ugu weyn ayaa ah in ay leedahay faa'iidooyinka soo socda.
1. Waxqabadka kala-soocidda oo wanaagsan maadaama aan wada ognahay, Yoga waxay leedahay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo kala duwan oo fidsan, oo u baahan dabaq adag oo dharka tababarka ah. Haddii dharka tababarka uu ka yar yahay laastikada, maahan kaliya inay soo saaraan raaxo-daro marka ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo fidsan, laakiin waxay sidoo kale si fudud u horseedi doonaan dharka ay u burburayaan sababta oo ah dardaaranka. Tayada dharka tababarka yoga, maxaa yeelay dharka ayaa ah mid laastik ah, waxay taageeri kartaa xoojinta badan ee fidinta, si looga fogaado xishood.
2. Waxqabadka wanaagsan ee Taageerada Yoga oo keliya ma aha mid weyn, oo habka dhaqanka ayaa lagama maarmaan u ah inuu saameyn ku yeesho jidhka, sidaa darteed dharka uu dharka u baahan yahay inuu helo taageero xoog leh. Guryaha yoga yoga waxaa si gaar ah loogu talagalay oo loo sameeyay isboortiga waxayna siin kartaa taageero wanaagsan jirka marka loo eego qaab dhismeedka dharka iyo si loo ilaaliyo dhammaan qaybaha.
3. Neefsashada wanaagsan bal inuu yahay heerkul heer sare ah ama yoga oo caadi ah, dadku waxay dhidi doonaan heerar kala duwan.
Haddii aysan ahayn mid dhakhso u qallalan isboorti caadi ah, waxay u horseedi kartaa dharka inuu ku dhejiyo maqaarka, oo uu ka dhigo mid daallan inuu dareemo raaxo daro. Si kastaba ha noqotee, dharka tababarka yoga ee xirfadleyda ah, dharku way ka neefsan karaan, waxay ka nuugi karaan biririfka si dhakhso leh, si aad u sii wado qalalaase oo raaxo leh, sidaas darteedna kor u qaadida khibradda dareenka tababarka.
Warshadda WZX waxaa ka go'an in laga dhigo mid firfircoon oo tayo sare leh, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto wixii baahi ah.
KA HOR WZX Maxay haweenka uurka u baahan yihiin inay xirtaan dharka dhalmada?
WZX Muxuu hooyadu u baahan tahay inuu xidho qaab-dhismeedka dhalmada ka dib dhalmada? XIGTA